Abakhenkethi bakwa-Israyeli bazimisele ukutyelela iTanzania emva kokubhubhisa i-Covid-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukhenketho lokuzonwabisa » Abakhenkethi bakwa-Israyeli bazimisele ukutyelela iTanzania emva kokubhubhisa i-Covid-19
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • inkcubeko • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iiarhente zeIsraeli ezifika eTanzania
I-Tanzania ibiphakathi kwamazwe ase-Afrika atsala abakhenkethi bakwa-Israeli abathanda kakhulu ukutyelela iipaki zezilwanyana zasendle kunye ne-Indian Ocean Island yaseZanzibar.
Malunga ne-140 yabakhenkethi bakwa-Israeli kulindeleke ukuba batyelele iTanzania kwinyanga ezayo emva kweenyanga zokuvalwa kunye nokuvalwa kokuhamba eYurophu nakwezinye iimarike eziphambili kubakhenkethi kwihlabathi liphela.
Umnumzana Shlomo Carmel, isigqeba kunye nomsunguli we-Another World Company Inkampani kwa-Israyeli wathi inkampani yakhe izakulungiselela iinqwelomoya ngenqwelomoya kubakhenkethi bakwa-Israyeli ukuba bandwendwele iTanzania.
I-Tanzania khange ibethwe kanobom ngulo bhubhane kodwa ukhuseleko kunye nokukhuseleka kwabakhenkethi kuthathiwe kwaye kwaqwalaselwa ngokuhambelana noMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) emva kokuba urhulumente eze neNkqubo yokuSebenza eseMgangathweni (SOP).
Iingxelo ezivela kwisekethe yabakhenkethi esemantla eTanzania zathi amaqela akwa-Israyeli ewonke abali-140 abakhenkethi kulindeleke ukuba bangene kumantla eTanzania kwinyanga ezayo (ngoMeyi) emva kokumka kweearhente zokuhamba ezili-15 kunye neefoto zokhenketho ezivela kwiLizwe elingcwele lakwa-Israyeli. iveki.
Malunga ne-2,000 yabakhenkethi abavela kwa-Israyeli bahlala eTanzania minyaka le.
Enye inkampani yeHlabathi iphakathi kweenkampani eziphambili zakwa-Israeli ezithengisa i-Afrika ngaphezulu kweminyaka eli-15. I-Tanzania iphakathi kweendawo zase-Afrika apho inkampani ibithengisa ukutsala abakhenkethi abavela kwiLizwe eliNgcwele lama-Israyeli, iYurophu, iMelika kunye nezinye iindawo zentengiso zabakhenkethi kwihlabathi liphela.
Inkampani inamava eminyaka emininzi kukhenketho lwaseAfrika ngeminyaka engama-30 kaMnu.Shlomo yokusebenza njengomkhokeli wabakhenkethi kweli lizwekazi liphela. Igxile kukhenketho lobunewunewu lwee-safari kuhambo oluphezulu olusemgangathweni kule ntsimi.
Iququzelele kwaye isebenza ngokukhenketho okukhethekileyo kunye nokunethezeka kwiindawo ezininzi ezinomdla kwaye ezinomdla kwihlabathi liphela.
Iqela lokuqala labameli bokuhamba abali-15 abavela kwa-Israyeli batyelele iNdawo yoLondolozo yaseNgorongoro, iSerengeti, iManyara kunye neePaki zeSizwe zeTarangire eMantla eTanzania kuhambo lokuziqhelanisa nokuvavanya imeko yangoku, yokuhamba eTanzania naseMpuma Afrika.
Iiarhente zonelisekile ngumtsalane kunye neeprotokholi ezibekwe ukuze ziqulathe iCovid-19 kwaye bathi bakulungele ukutsala abakhenkethi abaninzi ukuba batyelele le ndawo yeAfrika.
Ukuphuculwa okuninzi kwenziwe eTanzania ukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhenkethi ngeli xesha xa umhlaba uphantsi kwesoyikiso seCovid-19.
Iindawo zembali zakwaSirayeli ziindawo ezingcwele zamaKristu kunxweme lweMeditera, iSixeko saseYerusalem, iNazarete, iBhetelehem, uLwandle lwaseGalili kunye namanzi aphilisayo kunye nodaka loLwandle Olufileyo.
Abahambi ngezonqulo abangama-Afrika batyelela uSirayeli phakathi kuka-Matshi no-Epreli rhoqo ngonyaka ukuya kunika imbeko kwabo, iiNdawo eziNgcwele zakwaSirayeli naseJordani.